तपाईंको कार्यथलोमा सम्बन्ध कस्ताे छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तपाईंको कार्यथलोमा सम्बन्ध कस्ताे छ ?
साउन २ गते, २०७६ - १२:२९
घरपछि कर्यथलो अर्थात अफिस एउटा त्यस्तो स्थान हो, जहाँ तपाई सबैभन्दा बढि समय बिताउनु हून्छ । त्यसैले तपाई आफ्नो अफिसका सहकर्मीहरुसँग पनि सकारात्मक हुनु आवश्यक छ ।
अफिसमा तपाईले काम राम्रो गर्नु भएको कसैलाई मतलब हुँदैन तर तपाईको बोसलाई तपाई बिरुद्ध कुरा लगाउने, भड्काउने कामहरु तिब्र गतिमा हुन्छ । तर तपाईले यस्ता कुरामा पटक्कै ध्यान दिनु हुँदैन । आफ्नो काममा ध्यान दिनुहोस् र अफिसमा त्यस्ता कुरा हुँदै गर्छन् भन्दै आफु अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
अफिसमा पनि त्यस्ता धेरै व्यक्ति हुन्छन्, जसलाई आफ्नो कामभन्दा अरुको बढि चियो गर्ने बानी हुन्छ । अरुलाई बोलीले घोचपेच गर्ने, उडाउने र जिस्काउने गरेर आफु मनोरन्जन लिने गर्छन् । तर यी सब कुराका कारण तपाईले आफ्ना साथीभाईसँग सम्बन्ध टुक्राउनु हुँदैन । तपाइर्ंले उनीहरुलाई शालीन भएर सम्झाउने कोशिश गर्नुपर्छ । उनीहरुसंग अनावश्यक कुरा नगर्नुहोस्, काम पर्दा मात्र बोल्नुहोस् साथै उनीहरु र उनीहरुको कुरालाई सम्मान दिनुहोस् ।
यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनाले तपाईको अपिसमा पनि राम्रो छवि बनाउन सक्नु हुन्छ । अनलाइनखबर
साउन २ गते, २०७६ - १२:२९ मा प्रकाशित